Zụta Akaụntụ Tiktok na akaụntụ Tiktok maka ọrịre - AudienceGain
Kedu uru m ga-enweta ma ọ bụrụ na m zụta Akaụntụ Tiketi Monetized?
Enweela ya maka mmemme Fund TikTok.
Nkwado iji kpata ego ọbụlagodi na ịdabere na mba ndị tozuru oke.
Enweghị mkpa ịmepụta akaụntụ site na nke mbụ.
Na-ebelata oge iji lekwasị anya na ịmepụta vidiyo dị ukwuu.
Nkwado ịtọlite ​​ozi ịkwụ ụgwọ site na nzọụkwụ.
Kedu ihe kpatara ịzụta TikTok Monetized Aka ji dị mma maka ndị okike?
Kemgbe TikTok kwusiri ike ihe ọ chọrọ maka mmemme ego na ikpo okwu a. Akaụntụ gị kwesịrị ịgbaso ụkpụrụ nduzi siri ike iji nwee 10,000 ndị TikTok na-elele na nlele 10,000 na ụbọchị 30 gara aga. Eeh, ọ na - ama TikTokers ọhụrụ aka iru ya n’ime obere oge maka ọtụtụ ihe n’ihi na ịmebe akaụntụ na - achọ itinye ego na oge na ego mgbe niile. Ọbụna ma ọ bụrụ na akaụntụ gị tozuru oke itinye ego, usoro nyocha na nnabata nwere ike ịdaba n'ihe egwu n'ihi na TikTok dabere n'ọtụtụ ihe yana ọkachasị ọdịnaya vidiyo ahụ. Agbanyeghị, ịzụta Akaụntụ TikTok Monetized ga-enyekwu gị oge iji lekwasị anya n'ịmepụta vidiyo dị ukwuu kama ịhapụ igbu oge na usoro ndị na-enweghị isi.
Dabere na mgbasa ozi a na-ewu ewu n'ụwa niile, ịzụta Akaụntụ TikTok Monetized bụ ezigbo azịza maka ndị mmadụ ịkpata ego na Cov-19. Nweta ya ugbu a!
Enwere m ike ịzụta akaụntụ a ma ọ bụrụ na m bi na mba na-erughị eru?
Ee, kpam kpam. Anyị bụkwa ndụmọdụ ndị nwere ike inyere gị aka iji Akaụntụ Ego ma nweta ego na ya. Biko kpọtụrụ anyị ka anyị nwee ike ikwu okwu tupu ịzụrụ ma ọ bụrụ na ibi na mba na-erughị eru maka ego TikTok Creator.
Ihu ọma, ọ dị ka ozi dị n'okpuru:
Anyị ga-akwado gị iji nyochaa akaụntụ ahụ site na iji ozi ndị ọzọ nke dabere na mba tozuru etozu. (US, UK, Italy, French, Germany, Spain.)
Anyị ga-akwado gị melite ozi ịgba ụgwọ maka akaụntụ ahụ mgbe anyị nyochachara ya kpamkpam.
N'ikpeazụ, anyị ga-eduzi gị ịnata ma wepụ ego gị n'enweghị nsogbu.
N'ikwu eziokwu, ịkpata ego na mba ndị tozuru oke maka TikTok Creator Fund nwere ihe egwu ya. Ọ naghị eme n'ọtụtụ okwu mana oge ụfọdụ ọ ka na ụfọdụ akaụntụ (naanị 10% / 100%). Agbanyeghị, anyị ga akwado ịkwado ihe egwu dị ka o kwere mee.
Kedu ihe bụ nzọụkwụ mgbe m zụrụ akaụntụ ahụ?
Nke a bụ usoro nnyefe mgbe ị kwụrụ ụgwọ:
Zipu ozi nkwenye maka ịlele ịmepụta nhazi tupu ịnyefe.
Na-eche nkwenye n'aka ndị ahịa.
N'otu oge, ọ na-enen, anyị ga-akwadebe na-anapụta ọwa n'ime 24 awa gị email.
Gbanye nbanye ma jiri akaụntụ ahụ mma.
Mara: Ozugbo inyochachara ihe niile ma hụ na ọ dị mma dịka anyị siri kọwaa, anyị ga-emezigharị usoro ahụ.
Tupu ị nye iwu, anyị chọrọ ịgwa ndị ahịa gbasara atụmatụ ahụ. Mgbe ahụ, anyị ga-adabere na nke ahụ iji weta nke kachasị mma.
Ọzọkwa, nke ahụ ga-akachasị mma mgbe anyị na-akpọtụrụ ya na Whatsapp, Skype, ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ anyị nwere ike ikwurịta ozugbo. Anyị ga-adabere na ịkwado gị nke ọma.
Kedu ihe bụ akaụntụ ahụ?
Akaụntụ Monetized nke TikTok nwere ihe karịrị 10,000 Ndị na-eso ụzọ na Nlele 10,000 na gburugburu vidiyo 2-5 enweghị nwebisiinka.
E wezụga nke ahụ, anyị dabere na Social Media iji bulie vidiyo vidiyo TikTok ruo mgbe ọ ruru eru maka ego. Nke ahụ bụ 100% iwu ma na-agbaso ụkpụrụ TikTok. Agbanyeghị, iwulite akaụntụ site na Social Media ga-eweta ntụkwasị obi karịa. Site na nke ahụ, vidiyo ndị ga - eme n'ọdịnihu ga - enwe ohere karịa na mmetụta "ịrịa".